Thunderbird 91 ichave iri inotevera vhezheni yeMozilla tsamba yemutengi | Linux Vakapindwa muropa
Dai ndaizotaura kuti ndiri fanika isinga tsanangurike yeMozilla email mutengi, ndinenge ndanyepa kunge munhu ane hutsinye. Asi ini ndinofanira kubvuma kuti imotokari isiri yemugwagwa, uye zvaasingaite mushure mekumisikidzwa zero inogona kuita neimwe yekuwedzera. Semuenzaniso, neTbSync uye Provider yeCalDAV & CardDAV ndinogona kubata yangu iCloud khalendari, chimwe chinhu chandakaita muVivaldi, asi… yamira kushanda. Parizvino, shiri yekutinhira iri mushanduro 78, asi munguva pfupi iri kuuya Thunderbird 91.
Chichava chakakosha kudaro kugadzirisa kuita kusvetuka kwenhamba gumi nenhatu? Zvakanaka, mune izvi, zvinoita sekunge chinangwa cheMozilla ndechekuti kuverenga kuverengera neyavo webhurawuza, Firefox. Asi hongu, chichava chikuru kugadzirisa ine yakatanhamara nhau. Mumwe wavo achawedzera rutsigiro rweCalDAV makarenda, saka izvo zviviri zvekuwedzeredza zvandiri kushandisa parizvino hazvichadiwe. Ehezve, ini ndinofunga kuti, zvirinani kune iCloud Calendar, iyo yekugadzika haina kunyanyo nyore; pamwe nekuwedzeredzwa kwaikwana kuisa zita rekushandisa uye password, uye muThunderbird 91 isu tichafanirwa kuisa kero yacho nemaoko.
Thunderbird 91 inotsigira maCalDav makarenda pasina kuwedzerwa
Pakati penyaya dzinosvika neThunderbird 91, isu tine:
Tsigiro yematarenda eCalDAV.
Nyowani yekugadzirisa wizard.
Mikana yekupinza mafoni.
Kubvira kupinza / kutumira kunze ma profiles.
Nyowani yekugadzirisa kana kuitazve sarudzo.
Thunderbird 91 iri iyo hombe kuvandudzwa kweiyi 2021, saka izvo zvakajairwa kugadzirisa senge mabug fixes zvichabatanidzwawo. Ichasvika svondo rinouya, pamwe Chipiri, padyo nekuvhurwa kweFirefox 91. Ndiani anofarira kuyedza, yatovepo pane server yeMozilla, yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link. Kana isu tasarudza kuchengeta izvo zvatino goverwa zvinopa, isu tichafanirwa kumirira kanenge mamwe mazuva maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Thunderbird 91 ichave inotevera vhezheni yeMozilla tsamba yemutengi uye ichauya nenhau dzinozivikanwa
Q yangu akadaro
Ini ndakanyadziswa zvikuru nekarenda yeVivaldi uye ndaneta nazvo ndichikumbira chikamu chese chitsva kuti ndipinde muGoogle, kana ikasachengeta makuki, uye izvo hazvisi kuzoitika. Iye zvino ndiri pakati peFirefox, ndine matambudziko angu necaptchas dzeGoogle neVivaldi.
Hapana kuwedzerwa kunodiwa kushandisa makarenda neCalDav muThunderbird kwemakore.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuvhura iyo khalendari, tinya pane "nyowani karenda" uye mune sarudzo "karenda pawebhu" watove neCalDav sarudzo yakanangana.
Pindura ku prepostrophe
Hazvina kudaro neICloud. Muna '91 ichashanda.
uye isu tinoenderera mberi nechero graphic ficha, zvakanaka tinogona kuisa macolinesin mubhari rekushandisa, ndinofungidzira kuti mozilla / firefox ine basa rakakura uye rakakura, asi kunze kwekunge ikozvino karenda racho ranyanya kunetsa, unova mukana wekutamba 91 ?